Mareykanka oo heshiis Cuusb la galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya - Awdinle Online
Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa ku dhawaaqday heshiis is-afgarad ah ay gaareen ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo Arbacadii loo dhaariyay xilka, kadib ansixintii Xildhibaannada Golaha Shacabka.
Kaidb kulan ay yeesheen Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Amb, Donald Yamamota ayaa War kasoo baxay Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxaa marka hore loogu hambalyeeyay Ra’iisul Wasaaraha Cuusb oo ay codka kalsoonida siiyeen Xildhibaannada Golaha Shacabka.
Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho waxaa ay sheegtay in Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya ay ku heshiiyeen in la fuliyo heshiiskii la xiriiray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo muhiimada uu leeyahay.
“ Waxaan isku afgaranay ahmiyada ay leedahay in waqtiga doorashada lagu dhaqmo heshiiskii doorashada, maamul wanaaga, iyo sii wadida dib u habeynta dhaqaalaha iyo amniga ayaa lagu yiri” Warka kasoo baxay Safaaradda.
Mareykanka ayaa waxaa uu kamid yahay dalalka taageerada weyn siiya Soomaaliya, sida Amniga, Dhaqaalaha, doorashooyinka iyo dhinaca gargaarka Bani’aadanimo.
Previous articleMaamulka G/Banaadir oo ku dhawaaqay qorsho looga hortagayo kufsiga
Next articleDagaal culus ka dhacay Shabeellaha Hoose & khasaaro ka dhashay